Porcelain Veneers | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Kunyemwerera kutsva, kwakagadziridzwa kuri mukati mekusvika. Shandura Kunyemwerera Kwako Nemazino Veneers.
Veneers inzira iyo vanachiremba vemazino vanogona kuvandudza zvakanyanya kutaridzika kwekunyemwerera, kunyanya kana mazino akatsungirira kukuvara kwakanyanya kana kana mazino asina kuumbwa nenzira. Kukodzera veneers ndeimwe yemasevhisi atinopa kuOptiSmile sechikamu chedu huwandu hwakawanda hwekurapa kwemazino epamberi.
Ndicho chinangwa chedu kuchengetedza yakawanda yekunyemwerera kwako kwechisikigo uye nekupa mhedzisiro yenguva refu nekushandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye tekinoroji yazvino. Semuenzaniso, isu tinoshandisa zvemberi Digital Smile Design tekinoroji yekuona kuti varwere vedu vanogamuchira zano rakanakisa rekuti kunyemwerera kwavo kutsva kucharatidzika sei, tisati tatanga chero shanduko yemazino yakakura.
Chii chinonzi Meno Veneers?
Mavhenekeri emazino anoitirwa kubatsira varwere vane mazino akaomeswa zvakanyanya, akakuvadzwa kana kushanduka ruvara. Iwo akangoita akagadzirwa-akagadzirwa mateko akafanirwa kufukidza kumberi kwepamusoro pezino. Izvo zvakagadzirirwa kutarisa uye kuita nenzira imwecheteyo sezvaiitwa nemazino echisikigo, asi nerubatsiro rwakawedzerwa rwekuti iwe uve nesarudzo nezvechitarisiko chavo.
Mavhenekeri emazino anogona kugadzirwa kubva muvhu kana resin. Resin veneers inoda kuve neashoma ezino chairo rakabviswa sechikamu chekuiswa, asi sarudzo ipi inosarudzwa inoenderana zvakanyanya nemamiriro emazino ako pamwe nezvaunoda zvaunoda.
KuOptiSmile zvakakosha kuti isu tishande pamwe nevarwere vedu nerubatsiro rweyakaratidzirwa masisitimu ekuvakira kunyemwerera kwakanakira iwe. Kana usina chokwadi nezvesarudzo dzako, pinda mukutanga kubvunza. Iwe unozoshamiswa neakanyanya matekinoroji anowanikwa kubatsira kudzorera kana kunyange kugadzirisa kunyemwerera kwako.
Ndinoziva Sei Kuti Ini Ndinovada?
Izvi zvinonyanya kutsamira pamamiriro emazino ako, asi izvi ndizvo zvimwe zvezviitiko zvaungafunge nezvekuwana veneers:
Yakasviba, yakasviba uye yakasviba mazino (nekuda kwemishonga inorwisa mabhakitiriya, zera remeno nezvimwewo)
Kutenda kune zvinoshamisa zvinhu zveiyo veneer zvishandiso, veneers anogona kuvakwa nenzira yekuti vanovanza zvachose kubuda kwemazino. Uye uko imwe inongova nemazino mashoma akatsvuka, veneers anokwanisa kushandiswa kusanganisa mazino akaipa neruvara rwevavakidzani vane hutano.
Diastemas (maburi) pakati pemeno mune yako yekunyemwerera mutsara
Vamwe vanhu vane zvipenga zvisina kujairika pakati pemeno zvinoita kuti kunyemwerera kwavo kuite sekusatarisika. Nevhenekeri, nyanzvi dzemazino dzinogona kuzadza izvo zvipenga kuti mazino aonekwe zvakakwana zvakasikwa
Oddly akaumbwa gare gare incisors (peg laterals)
Mazino ane zvimiro zvisina kujairika, zvakakombama kana kumisikidzwa zvisina kukodzera anogona kuvharwa nerubatsiro rwevhenekeri. Mhedzisiro yacho inoshamisa kunyange seti yemazino anotaridzika kunge akaumbwa zvakaenzana uye achienderana nemamwe mazino
Mazino asina kumira zvakanaka
Ivo vanhu vane akavhunika, akachekwa kana akasakara zvakanyanya mazino ndiwo akakodzera kukwikwidza mazino veneers
Uye mune dzimwe nguva
veneers anogona kushanda senzira iri nani kune varwere vanogona kunge vachifunga nezvekorona dzemeno. Uye nekuda kwekuti dzinogara kwenguva yakareba, dzakachipa uye hadzina kurwadziwa (zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzemazino) kuisa, dzinoita sarudzo yakanaka yekubata nenyaya dzino dzinoverengeka dzemazino.
Ndeipi Veneers Isisiri Yakanaka Sarudzo?
Veneers inogona kunge isingave mhinduro yakanakira munhu wese uye inogona kusakurudzirwa mune zviitiko zve:
Chimiro chisina kukwana chemazino (Haina kukwana enamel yekubatanidza. Veneers anongobudirira mukufamba kwenguva kana gadziriro yavo yemeno iri mune enamel sezvo simba rechisungo pazino-veneer interface rakasimba kwazvo kupfuura zvazvaizoita kune ari pasi dentine)
Mazino akakomberedzwa kusvika kure kumeso (kumiromo yako)
Makuru Diastemas (mahombe makuru)
Mazino akashata kwazvo
Parafunctional tsika (kuchenesa / kukuya)
Nekudaro, OptiSmile inopa mhinduro dzinoverengeka, saka kana veneers isiriyo sarudzo, panogona kunge paine dzimwe mhinduro dziri nani kwauri.
Mhando dzeDental Veneers
Mavhenekeri emazino anogona zvakare kushandiswa seimwe nzira kumakorona sezvo iwo ari mashoma mukana wekuratidza kubuda kweruvara uko iko kudzoreredza kunosangana nechumutsetse.
Kune mhando mbiri dzevhenekeri dzinoshandiswa navanachiremba vedu vemazino:
Ichi chinhu chinofarirwa zvakanyanya nekugadzira mahedheni nekuda kwesimba rayo nekusimba.
Kana veneers emapuraseti akatariswa zvakanaka nehunyanzvi nekuchengetwa kwenguva dzose vanogona kugara kusvika makore makumi maviri nemashanu.
Imwe mukana wekuve neforcelain veneers kugona kwayo kuratidza mwenje uye kuenderana yakapoteredza mazino echisikigo.
Zvinoumbwa nevhu zvinogona kuvakwa zvakananga mumuromo mako, nevapfekeri vanokwanisa kubatanidzwa uye kuumbwa kumberi kwemeno ako mukushanya kumwe chete kwachiremba wemazino.
Mhando iyi ye veneer inogona kupa yakaenzana chiyero chekuvandudza kune chitarisiko senge chevhu.
Veneers yezvinhu zvakasanganiswa zvinowanzo kuve zvakachipa pane porcelain kunyangwe zvadzisingagone uye dzinogona kunge dzichida kutsiviwa kazhinji.
Kana iwe uchitsvaga wemazino mitengo yeKapa, ​​OptiSmile inokupa iwe zano rekuti chii chingatarise mutengo weiyi nzira. Mutengo wemazino veneers unogona kusiyana zvichienderana nezvakawanda zvinhu. Zvinhu zvinogona kukanganisa mutengo zvinogona kusanganisira izvo zvinhu zvaunosarudza kune ako veneers uye nzvimbo yezino inogamuchira iyo veneer. Semuenzaniso, macomputer veneers ndiyo inodhura sarudzo kupfuura porcelain veneers, uye kazhinji kuve neine veneer inoshandiswa kuzino repamberi kunodhura kupfuura iro reinoona risinganyatsooneka. Iyo nzvimbo yaunosarudza kugamuchira kurapwa inozokanganisawo mutengo wevanopa mazino.
Dzivisa Vanodhura Veneers!
Kana zvasvika pakurapwa kwemazino, kucheka makona uye kusarudza sarudzo yakachipa dzimwe nguva kunogona kukubhadhara zvakanyanya mukufamba kwenguva. Chiremba wemazino Cape Town mitengo inogona kusiyana zvakanyanya.
Kusarudza Yakachipa Veneer Inowanzo Tungamira Kune Dzakadai Senge:
Iyo isina kukodzera kukwana, inotungamira kune kumwezve chiremba wemazino kushanya mukuyedza kuumbazve iyo veneer
Kuva unowanzo tenderera kutsemuka uye kukuvara, zvinotungamira mukugadzirisa kana kutsiva
Kunyemwerera kushoma kwechisikigo, nekuda kwehunhu hwepasi huri kuoneka pakati pemazino akakomberedza.
Iyo inogara iri sarudzo iri nani kusarudza yemhando yepamusoro, yakavimbika mhinduro yekurapa kwako mazino pane kusarudza kurapwa kunoenderana chete nemutengo. Vhenji akachipa anogona kazhinji kutungamira mukugadzirisa kunodhura uye kushanya kwachiremba wemazino, pamwe nekunyadziswa kwekuonekwa kwakanyanya uye kushomeka.
Nei maVeneers ako Akaitwa PaOptismile
Veneers, nepo isinganzwisisike mhinduro yemazino, haisi nguva dzose sarudzo yakanakira munhu wese. Ichi ndicho chikonzero maitiro edu ekubvunzurudza akakosha, sezvo ndipo patinoenzanisira zvakakwana izvo varwere vedu zvavanoda kuzadzikisa nemazano edu. Yedu Dhijitari kunyemwerera Dhizaini uye CAD CAM tekinoroji inobatsira zvakanyanya mukuroora zvinangwa zvemurwere uye maonero pamwe neyedu sevashandi vemazino. Tichagara tichitarisa kuchengetedza mazino tisati taita chero kurudziro inochinja mamiriro emazino ako echisikigo.
Nekudaro, hazvisi kungori pamberi pemaitiro atinoshandira kupa tarisiro yakanaka. Kuona kuti varwere vanogashira padhuze nekurwadziwa kwemazino mafomu inoumba chikamu chikuru chedu chezuva nezuva maitiro.
Kazhinji, tinokumbira varwere vedu kuti vauye kuzobvunzurudzwa kwekutanga, vaongorore mamiriro emazino avo kuti vaone kana veneers iri sarudzo yakanakisa. Isu taizogara tichitarisa pakuchengetedza mazino tisati tambochinja zvakanyanya.
Sechikamu cheyedu nzira yekubvunzana, tichaita ongororo yemuromo, ma-ray (kana zvichidikanwa), tora mifananidzo yemuromo wako uye wotora fungidziro yemuromo wako. Izvi zvinobva zvatumirwa kurabhoritari uko kunogadzirwa wakisi. Izvi zvinobva zvadzorerwa kuOptiSmile kwatinogadzira chakuvhe cherabha chakagadzirwa, kushanda nemutengi kuti vawane mazino avo akaumbwa zvakanaka. Maitiro aya anozivikanwa seDhijitari kunyemwerera Dhizaini uye inopa varwere mukana wekuti vawane pfungwa yezvavanogona kutarisira tisati tatanga chero basa chairo pameno pachavo.
Chaizvoizvo mashandisiro evheneti anonyanya kutevedzera anotevera matanho:
1. Kugadzirira - Izvi zvinosanganisira kubviswa kwe ½ millimeter enamel kubva pamusoro pezino. Izvi zvinowanzoitwa nerubatsiro rweanesthetic yemuno kupaza nzvimbo
Imwe modhi inozotorwa kubva mumuromo mako, iyo inozotumirwa kurabhoritari uko kunogadzirirwa seti yakakwana yeavhenere.
2. Kubatanidza - Vasati vatema vamiswa kumazino ako echisikigo, iwo mavhenekeri anozoiswa pamusoro pezino kuti ive nechokwadi chekuti chakaringana maererano nehukuru uye neruvara. Iwo mavhenekeri, padanho rino, anogona kutetetwa, kuvezwa kana kugadziridzwa sezvazvinodiwa.
Mazino anogezwa obva aiswa pazino nesamende chaiyo. Kana zino racho rangova pachinzvimbo chakaringana, simende inozoburitswa padanda rakakosha rinoita kuti simende iome, kukiya iyo veneer zvakachengeteka munzvimbo.
Nhanho yekupedzisira inosanganisira kubviswa kweimwe simende yakawandisa kubva pakati pemeno uye isu tinokukumbira kuti udzoke kuti uone kuti uri kuenderera mberi sei neako matsva veneers.
Isu tinotora kutarisirwa kwakanyanya kuona kuti varwere vedu vari kuwana mhinduro yakanakisa yezvavanoda. Kana iwe uchida kuwana veneers, saka ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuuya kuzotiona kuzokurukura sarudzo yako. Isu takafambira mberi mazino workflows munzvimbo kuti tione kuti isu tinokwanisa kubatsira varwere nekukurumidza uye zvinobudirira sezvinobvira.